wrongcops.com dia tranokala tsara indrindra izay manome fampahalalana momba ny fandrafetana loko ao anaty sary mandeha ho azy rehefa avy nampidirinao tao amin’ny fitaovana mpividy loko. Misy loko mihoatra ny 80 ity tranokala ity ary mety ho sarotra aminao ny manapa-kevitra ny mandany loko sasany ao anaty sary iray. Aseho am-pireharehana, ny wrongcops.com dia nandefa fitaovana mpanangona loko izay azonao ampiasaina amin’ny fotoana rehetra izay tianao.
Rehefa mandefa sy manangona amin’ny alàlan’ny fitaovana an-tserasera ianao, dia amboariny ny fizahana mahita ny lisitry ny loko ao anatiny. Raha ny vaovao, ny valiny dia misy ny antsipiriany mahasoa sasany toy ny sary miloko, HEX, RGB, ary ny anaran’ilay loko ihany koa. Ity dia tranokala mahavariana satria ahafahanao mahita loko miloko ao anatin’ny segondra amin’ny alàlan’ny fitaovana. Noho izany, Ankafizo ny fahitana ireo loko miafina ao amin’ny sarin’ny sarinao.
Mampiseho zavatra maro momba ny loko ho anao rehetra ity tranonkala ity. Aminao amin’ny tsindry iray monja amin’ity tranokala ity, dia afaka mahazo sary maro ianao. Ireto misy hevitra azonao azonao
Fa ny iray dia momba ny loko. Misy ny loko loko, ny kofehy loko, ny haben’ny loko ary ny anarana loko. Ny loko fototra dia manana loko telo, misy ny mena, ny manga ary ny mavo. Amin’ny loko fototra, afaka mahazo loko maro mitambatra ianao izay nanentana anao rehetra, izany hoe ny loko faharoa. Ohatra, ny mitambatra mena sy mavo dia hamoaka loko manga, ny mitambatra mavo ary ny manga dia hamokatra loko maitso, ary ny farany dia mena ary ny manga dia miteraka loko volomparasy.
Raha mitambatra loko hafa dia maro no miteraka loko an’arivony tapitrisa. Ny loko dia mizara ho vondrona roa ihany koa, dia ny loko mafana sy ny loko mangatsiaka. Ny loko mafana dia vokatry ny manala loko mangatsiaka. Ny loko mafana dia mahatonga ny zavatra ho lasa mavesatra sy matevina. Ny loko mafana dia mena, volomboasary, volamena ary volontany. Raha ny fahatsapana ny loko mangatsiaka dia manjary mihamazava sy marevaka kokoa ny zavatra. Ny mitambatra ao anaty loko mangatsiatsiaka dia maitso, volomparasy sy manga maivana.
Ny fifangaroana loko dia vokatry ny famoronana nofinofy sy fiheverana an’olombelona. Ny loko samy hafa dia manana fomba fijery samihafa ho an’ny olona. Ny fifangaroan’ny loko dia mahatonga ny fiainana kokoa loko sy tsara tarehy kokoa. Ambonin’izany, ny fitambaran’ny loko dia mety hamokatra loko tena mahavariana. Azonao atao ny mampihatra fampangaroana loko amin’ny zavatra manodidina antsika, toy ny amin’ny rindrina, ny fanaka fanaka, ny fisafidianana loko amin’ny lamba, ny loko hoso-doko, ny haingon-trano sns.